Sonnet က 1TB Lightning-Fast Fusion Thunderbolt3PCIe Flash Drive ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Sonnet Lightning-Fast Fusion Thunderbolt 1 PCIe Flash ကို Drive ကို၏ 3TB ဗားရှင်းဦးလွတ်မြောက်
Irvine, ကာလီဖိုးနီးယား - ။ သြဂုတ်လ 31, 2017 - Sonnet Technologies ကယနေ့ယင်း၏ Fusion (TM) Thunderbolt (TM)3PCIe (R) Flash ကို Drive ကို, Thunderbolt3interface ကိုအတူကြမ်းတမ်း, အိတ်ကပ်-size ကို Solid-State Drive ကို (SSD) ကိုသိုလှောင်ရေးကိရိယာတစ်ခုဗားရှင်းအသစ်ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ NVMe flash ကိုသိုလှောင်မှု 1TB တပ်ဆင်ထား, နောက်ဆုံးပေါ် Fusion Thunderbolt3PCIe Flash ကို Drive ကို Mac နဲ့ Windows အတွက်နှစ်ဦးစလုံးကွန်ပျူတာများနှင့်သဟဇာတဖြစ်ပြီး, ဒေတာ transfer ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ Thunderbolt 40 ၏ 3Gb / s နဲ့ bandwidth ကို 2600 ကို MB / s အထိအမြန်နှုန်း leverages ။
"Thunderbolt3နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ Fusion PCIe Flash ကို Drive ကိုကမ္ဘာ့အလျင်မြန်ဆုံးဘတ်စ်ကား-powered ကိရိယာဖြစ်သည်။ ဒါဟာကိုယ့်အကြောင်းကိုမဆို 4K လုပ်ငန်းအသွားအလာများအတွက်လိုအပ်သည့်အမြန်နှုန်း ultra-မြင့်မားတဲ့ဖိုင်လွှဲပြောင်းပို့ဆောင်နိုင်စွမ်းရဲ့ - အသုံးပြုသူများအပြင်ပအညွန့်မှာမြင့်မားတဲ့ frame rate ကို 4K ကဗီဒီယိုတည်းဖြတ်တစ်ခု Ultra-အစာရှောင်လွန်း drive ကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်ယူ-ဘယ်နေရာမှာမဆိုခြစ် drive ကိုလိုအပ်ပါတယ်ရှိမရှိ, "ရောဘတ် Farnsworth ကပြောပါတယ် Sonnet Technologies က၏, CEO ဖြစ်သူ။ "ယခုမှာ NVMe သိုလှောင်မှုပေါင်း MacOS လိုက်ဖက်တဲ့၏ 1TB မှစွမ်းရည်အတွက်တိုးနှင့်တကွ, drive ကို ပို. ပင်စွယ်စုံယခင်ကထက်ဖြစ်၏။ "
the Fusion Thunderbolt3PCIe Flash ကို Drive ကိုအာဏာပေးဝေဘို့လိုအပ်ကြောင်းအားဖြင့် unencumbered အမှန်တကယ်ခရီးဆောင်သိုလှောင်ရေးကိရိယာအတွက်အဆုံးစွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်လိုလားသူသုံးစွဲသူများအဘို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ အဆိုပါသိုလှောင်ရေးကိရိယာက၎င်း၏3မီတာ Thunderbolt 0.5 (3Gb / s) ကိုကေဘယ်လ်နှင့်အတူမည်သည့်သဟဇာတ, Mac သို့မဟုတ် Windows ကွန်ပျူတာဖို့, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး Thunderbolt 40 device ကို daisy ကွင်းဆက်ရဲ့အဆုံးမှာဆက်သွယ်။ နောက်ဆုံးပေါ် PCIe ဗိုလ်ချုပ်ကြီး3flash မှတ်ဉာဏ်နည်းပညာအပေါ်အခြေခံပြီး, ကို Fusion Thunderbolt3PCIe Flash ကို Drive ကို 6Gb / s နဲ့ SATA SSDs နဲ့ USB3SSD ကို drives တွေကိုထက်ငါးဆပိုမိုမြန်ဆန်သည်။
အရပ်ရှည်ရှည် 2.8 လက်မအားဖြင့်နက်ရှိုင်းသော 4.1 လက်မအားဖြင့်ကျယ်ပြန့်တဲ့ကျစ်လစ်သိပ်သည်း 1.25 လက်မတိုင်းတာခြင်း, ကို Fusion PCIe Flash ကို Drive ကိုထိထိရောက်ရောက် SSD ကိုအေးနှင့်အသံတိတ်စစ်ဆင်ရေးကို enable တစ်ပန်ကာဘို့လိုအပ်ကြောင်းရှင်းလင်းစေပါတယ်ထားတဲ့လူမီနီယံထဲကထွင်းထုတဲ့ကြမ်းတမ်းဝင်း, ပါရှိပါတယ်။ ပါဝါ-အကျိုးရှိစွာဒီဇိုင်းဘတ်စ်ကား-powered ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမ AC ပါဝါ adapter လိုအပ်သည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ Sonnet Technologies ကကဒီဇိုင်းနှင့် built, ကို Fusion Thunderbolt3PCIe Flash ကို Drive ကို MacOS (R) 10.12.6 + နှင့်မိုက်ကရိုဆော့ဖ (R) ကို Windows 10 နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်။ 3TB စွမ်းရည် (အပိုင်းအရေအတွက်က FUS-TB1-3TB) နဲ့ကို Fusion Thunderbolt 1 PCIe Flash ကို Drive ကို $ 2017 တစ်ခု MSRP မှာစက်တင်ဘာလနှောင်းပိုင်း 999 ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ကို Fusion Thunderbolt3PCIe Flash ကို Drive ကိုအပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.sonnettech.com/product/fusiontb3pcieflashdrive.html.
Sonnet နှင့်၎င်း၏အခြားထုတ်ကုန်များအပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.sonnettech.com.
Sonnet Technologies က Inc က PCIe မှ Thunderbolt (TM)3(R) ကဒ်တိုးချဲ့စနစ်များကိုတစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူရှိ၏ လိုလားတဲ့အသုံးပြုသူများနှင့်ဂိမ်းကစားဘို့အပြင်ပဂရပ်ဖစ် (eGFX) ဖြေရှင်းချက်; ထောက်ခံတဲ့မီဒီယာစာဖတ်သူများ; ဆိပ်ကမ်းဆီနှင့် Adapter က; နှင့်ကွန်ယက်, သိမ်းဆည်းခြင်း, နှင့်အသံ, ဗီဒီယို, နှင့်ထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်လိုလားသူအသုံးပြုသူများအတွက်သည်အခြား interface ကိုကတ်များ။ Sonnet ရဲ့ Thunderbolt တိုးချဲ့ထုတ်ကုန်လိုလားသူအသံ I / O နှင့် DSP ကတ်များလိုလားသူဗီဒီယိုရိုက်ခြင်းနှင့် transcoding ကတ်များ, GPU ကိုကတ်များ, ကွန်ယက်နှင့်သိုလှောင်မှု interface ကိုကတ်များနှင့် Thunderbolt နည်းပညာ-enabled ကွန်ပျူတာများနှင့်အတူအခြား high-performance ကို PCIe ကတ်များ၏အသုံးပြုမှုကို enable ။ 30 နှစ်ပေါင်း Sonnet ရှေ့ဆောင်နှင့် Mac (R), Window (R) နှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်း-စံကွန်ပျူတာများ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဆက်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရန်ကြောင်းဆန်းသစ်နှင့်ဆုရထုတ်ကုန်စျေးကွက်မှယူဆောင်ခဲ့သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက www.sonnettech.com မှာရရှိနိုင်ပါပြီ။
နှုတ်ကပတ်တော်ကို Doc သို့ Link ကို: www.wallstcom.com/Sonnet/170831Sonnet.docx
Image ကို Link ကို: www.wallstcom.com/Sonnet/sonnet-fusion-thunderbolt3-pcie-flashdrive.zip
Image ကိုစာတန်းထိုး: Sonnet Technologies က Fusion (TM) Thunderbolt (TM)3PCIe (R) Flash ကို Drive ကို
ပြင်သစ်ဘာသာပြန်ချက်ဖို့ Link ကို: www.wallstcom.com/Sonnet/170831FR.htm
ဂျပန်ဘာသာပြန်ချက်ဖို့ Link ကို: www.wallstcom.com/Sonnet/170831JP.pdf
စပိန်ဘာသာပြန်ချက်ဖို့ Link ကို: www.wallstcom.com/Sonnet/170831SP.htm
တွစ်တာပေါ်မှာ Share: twitter.com/intent/[အီးမေးလျ protected]%20Releases%201TB%20Version%20of%20Lightning-Fast%20Fusion%20Thunderbolt%203%20PCIe%20Flash%20Drive%20-%20https://goo.gl/QY5vFg
Sonnet Technologies က Follow:
Facebook က: www.facebook.com/SonnetTech/
1TB ဗားရှင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ flash drive ကို fusion Thunderbolt လျှပ်စီး-Fast Fusion Thunderbolt3SoftAtHome, MStar, CES2017 Sonnet သိုလှောင်ရေးကိရိယာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2017-08-31
ယခင်: ဒေတာကို Entry 'ရာထူးတစ်ခုအွန်လိုင်းအီးစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီဖွင့်
နောက်တစ်ခု: Decentrix Mediabase ဂါးဒီးယန်းစီးပွားရေး Optimization ရိုးရှင်းဖို့မှာ Data အတိုင်းအတာအသုံးပြု